निर्मला प्रकरणमा गल्ती सच्याउन छाडेर अनलाइनखबर फेरि यसरी बहकियो – MySansar
Posted on July 24, 2019 February 10, 2020 by Salokya
निर्मला प्रकरणमा आफूले गरेका गल्ती सच्याउनुको साटो अनलाइनखबर फेरि बहकिन थालेको छ। मंगलबार यसका सम्पादक अरुण बरालसहितको बाइलाइनमा ‘निर्मला हत्या प्रकरण : चार प्रतिवेदन बने, हात लाग्यो शून्य’ शीर्षकको समाचारले देखाउँछ, यो प्रकरणलाई गिजोल्नमा आफ्नो पनि भूमिका रहेको स्वीकार्न अनलाइनखबरको नेतृत्व पटक्कै तयार छैन। अनलाइनखबरले नै बम दिदीबहिनीको घरमा एसपी दिल्लीराज विष्टका छोरा किरण विष्ट र मेयरका भतिजा आइरहने समाचार लेखेको थियो। त्यही समाचार पढेर धेरैले बम दिदीबहिनी खराब चरित्रका केटी भएको एसपीका छोरा अपराधीको धारणा बनाएका थिए। तर कञ्चनपुर गएका अहिलेसम्मका सबै प्रहरी अनुसन्धान टोलीले भेट्टाएको र बम दिदीबहिनीकै घर वरपरका छिमेकीहरुले समेत बताएको कुरा एउटै हो- यो गलत हो। गलत समाचार छापेकोमा माफी मागेर त्यस्तो गल्ती कसरी भयो भन्ने बारे आत्ममूल्याङ्कन गर्न त परै जाओस्, अनलाइनखबर एक झुठ लुकाउन हजार झुठ बोल्नुपर्छ भन्ने उखान अनुसार अरु गल्ती गर्दै जाँदैछ। अनलाइनखबरको समाचारको विषय त अब अदालतमा पनि प्रवेश गरिसक्यो। अदालतमा उसले आफ्नो समाचारको कसरी बचाउ गर्ला?
निर्मला प्रकरणलाई ट्विस्ट एन्ड टर्न गर्ने प्रमुख पात्रमध्येका एक पत्रकार खेम भण्डारीविरुद्ध एसपी विष्टका छोरा किरण विष्टले कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यो मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा खेम भण्डारीले यो इस्युमा किरणको नाम आफूले नभएर अनलाइनखबरले नै पहिलो पटक जोडेको प्रत्युक्तर दिएका छन्।
‘नेपालकै नम्बर एक मानिने अनलाइन पत्रिका अनलाइनखबर डट कमले पहिलो पटक बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा प्रष्ट रुपमा विपक्षी किरण विष्टसहितका व्यक्तिको नाम जोडेर समाचार प्रकाशन गरेको हो,’ अदालतमा जेठ २ गते प्रस्तुत गरेको प्रत्युक्तरमा खेम भण्डारीले भनेका छन्, ‘अनलाइन खबर डट कमजस्तो प्रतिष्ठित समाचार माध्यमले विपक्षी किरण विष्टको नामै तोकेर बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा निजको संलग्नता रहेको समाचार प्रकाशन गरेपछि सन्चारजगत र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुँदा म र मेरा प्रकाशनहरुका लागि पनि त्यो खुलासा समाचारमूल्ययुक्त लाग्नु स्वाभाविक नै हो।’
उनले अनलाइनखबर डट कमलाई उद्‍धृत गर्दै दैनिक मानसखण्ड र मानसखण्ड डट कममा पनि समाचार लेखिएको पनि बताएका छन्।
भनेपछि अब बम दिदीबहिनीको घरमा किरण विष्ट आउने जाने गरेको भनेर लेखेको समाचारका कारण यो प्रकरणमा यति धेरै उनीहरुको बदनामी भयो, त्यसको जिम्मा अनलाइनखबरले नै स्वभाविक रुपमा लिनु पर्‍यो कि परेन? कि अनलाइनखबरले बम दिदीबहिनीको त्यो घरमा किरण विष्ट र मेयरका भतिजा जाने गरेको प्रमाणित गर्न सक्नुपर्‍यो। कि हैन भने गलत लेखिएको स्वीकार गरी क्षमा माग्नुपर्‍यो। अनलाइनखबर त्यो दुवै गर्न तयार छैन। बरु गृह मन्त्रालयले नौ महिना अगाडि नै सार्वजनिक गरिसकेको छानबिन प्रतिवेदनलाई उद्‍धृत गर्दै उल्टै बम दिदीबहिनी र किरण विष्टमाथि शंका किन नगर्ने भन्ने पाराको समाचार लेख्छ।
यो नौ महिनामा यो प्रकरण धेरै अघि बढिसक्यो। प्रहरीका धेरै अनुसन्धान टोलीहरु त्यहाँ पुगेर अनुसन्धान गरिसके। स्वयं निर्मलाकी आमाले समेत सार्वजनिक भएका भिडियोहरु हेरिसकेपछि पहिलेभन्दा फरक बोली बोल्न थालिसकेकी छिन्। पहिले स्पाइरल अफ साइलेन्सका कारण खुला रुपमा बोल्न नसकेका छिमेकी र अरु व्यक्तिहरु पनि अहिले बोल्न थालिसके। तर अनलाइनखबर भने अझै नौ महिना अघिकै ह्याङमा रहेछ जतिबेला गृह मन्त्रालयले गठन गरेको मैनाली आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो।
अनुसन्धानको बारेमा पटक्कै ज्ञान नभएको निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा गठन गरिएको यो आयोगले नयाँ कुरा केही ल्याएको थिएन। खाली बजार हल्लालाई वैधानिकता दिने गरी यसले यस्तो भन्यो, उसले यस्तो भन्यो भन्ने कुराको बयान संकलन मात्र थियो यो। त्यसैलाई टेकेर अझै बम दिदीबहिनी र किरण विष्टमाथि शंका गरिरहनु पर्छ भन्ने पाराले प्रतिवेदनका अंश उद्‍धृत गर्दै अनलाइनखबरले मंगलबार समाचार लेखेको छ।
यो समाचारका तथ्यगत त्रुटिहरु यस्ता छन्-
समाचारमा लेखिएको छ- गृह मन्त्रालयद्वारा गठित मैनाली समितिबाहेक निर्मला प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संगठन र प्रहरी प्रधान कार्यालयका तत्कालीन डीआईजी धिरु बस्न्यातको नेतृत्वमा पनि छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनहरु तयार भएका थिए । अहिलेसम्मका कुनै पनि प्रतिवेदनले अभियुक्तको किटानी गर्न सकेका छैनन् । न त यी प्रतिवेदनमाथि टेकेर प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान नै गर्न सकेको छ । गृहको छानविन प्रतिवेदन एकातिर छ, सरकार र प्रहरीको ध्यान अर्कैतिर मोडिएको छ । गृह मन्त्रालयबाट गठित मैनाली समितिको प्रतिवेदनले निर्मला पन्तको बलात्कार एक जना व्यक्तिबाट सम्भावना कम देखिएको र अन्यत्रै हत्या गरेर उखुबारीमा फालिएको हुन सक्ने निश्कर्ष निकालेको थियो ।
यी चारै वटा समिति निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउने भन्दा पनि को कसको के कमजोरी भयो ? किन यत्रो आन्दोलन भए ?आन्दोलन हुनका कारणहरु के थिए ? भन्ने पत्ता लगाउने तथा छानविन गर्ने उद्देश्यका साथ गठन गरिएको थियो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। गृह मन्त्रालयबाट गठित हरिप्रसाद मैनालीको समितिको एक जनाले घटना घटाउन सम्भव थियो कि थिएन भन्ने छुट्याउने जिम्मेवारी थिएन। त्यो समितिमा त्यस्ता जघन्य अपराध अनुसन्धान गर्ने दख्खल भएका विषय विज्ञ पनि थिएनन्। त्यसको अभावमा घटना कसरी घट्यो र कसले घटना घटायो भन्ने सजिलै निश्कर्ष दिन सकिने विषय नै होइन। घटना कसरी घट्यो भन्ने सम्बन्धमा हालसम्म अनुसन्धानमा खटिएका विभिन्न टोलीहरुको त एकमत पाइँदैन, ती सब आ-आफ्नो क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो
नेपाल मानव अधिकार संगठन (ह्युरोन) का अध्यक्ष इन्द्र अर्यालको स्थलगत प्रतिवेदनमा बबिता बम ओपेरा होटेलको डान्सबारमा डान्सरको रुपमा काम गर्थिन र दुई जना केटीहरुलाई कपडा समेत किनिदिएको कुरा उल्लेख छ। यो गलत हो। न त ओपेरा होटलमा डान्स बार छ, न त बबिता त्यहाँ डान्सरको रुपमा कार्यरत नै थिइन्। हामीले पहिलोपोस्टको #WhoKilledNirmala को शृङ्खलामा यो कुराको खुलासा गरिसकेपछि इन्टरनेटमा राखिएको प्रतिवेदन गुपचुप सच्याइएको थियो। कपडा किनिदिएको भन्ने कुरा कहाँ किनेको भन्ने कुनै पुष्टि नभई आधारहीन कुराहरु बिना तथ्य जनतालाई भ्रममा पार्ने कार्य भएको छ। ह्युरोनकै प्रतिवेदनमा भैँसी ब्याएको, लाश लिन बम दिदीबहिनीको घरमा राति टुकटुक आएको जस्ता हावादारी कुरा राखिएको छ। त्यहाँ वरपर कतै भैँसी ब्याएकै थिएन। छिमेकीहरुलाई अझै सोध्दा पनि थाहा हुन्छ।
समाचारमा लेखिएको छ- घटना भएको १० महिनासम्म निर्मला पन्तका हत्याराबारे प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेको छैन । बरु यसबीचमा कञ्चनपुरका पत्रकार खेम भण्डारीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा ४ वटा मानहानीका मुद्दा दर्ता भए ।
खेम भण्डारीमात्र एक्ला होइनन् मुद्दा खेप्ने। मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्र अर्याल र भक्ति फुलारासमेत छन् जसविरुद्ध गाली बेइज्जतिको मुद्दा बबिता बमले दायर गरेकी थिइन्। त्यसैगरी सबैभन्दा पहिला अनुसन्धानमा खटिएका ८ जना प्रहरी विरुद्ध पनि यातना र प्रमाण नष्टका दुई वटा मुद्दासमेत परेको छ। अनलाइनखबरलाई खेम भण्डारीको मात्र माया लाग्नु पनि अनौठो नै हो।
समाचारमा लेखिएको छ- प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालको सचिवालयमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दीपक थापा पनि निर्मला हत्या प्रकरणलाई प्रहरी मुख्यालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन्।
दीपक होइन रमेश थापा हुन्। दीपक थापा नामका एक जना डिआइजी र अर्का एसएसपी छन्। सचिवालयमा भएका चाहिँ रमेश थापा हुन् एसपी।
समाचारमा लेखिएको छ- हालै यस प्रकरणको अनुसन्धानका लागि कञ्चनपुरमा खटिएका एक प्रहरी निरीक्षकले अनलाइनखबरका सम्वाददातासँग सुनाए, ‘दिलिप सिंह नै दोषी हो भने कि त डीएनए मिल्नुपर्‍याे, होइन भने हेडक्वार्टरले डीएनए परीक्षण नै गलत छ भन्न सक्नुपर्‍याे ।’
डिएनएको बारेमा पनि धेरैलाई कन्फ्युजन छ। धेरैले डिएनए भनेको के हो र कसरी मिल्छ कसरी मिल्दैन भन्ने नै बुझेका छैनन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट गठित डिएनए विज्ञसहितको टोलीले डिएनए परिक्षणमा विभिन्न त्रुटि कमि कमजोरी भएको कुराहरु औँल्यायो। सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको ब्यक्ति पहिचान गर्ने (अटोजोमल) नभई वंश पहिचान गर्ने (Y-STR) विधिबाट मात्र डिएनए परिक्षण भएको बुझ्नुपर्छ। अहिले डिएनए मिलेन मिलेन भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो Y-STR डिएनए कथंकदाचित फलानोसँग मिल्यो भने पनि त्यही अपराधी हो भन्न मिल्दैन। अरु कुराहरु पनि मिल्नुपर्छ त्यसका लागि। नेपालमा अहिलेसम्म बलात्कारको केसमा डिएनए मिलेर जेल गएको उदाहरण छैन। बरु डिएनए नमिले पनि ललितपुरको गोदामचौर बलात्कार केसमा जिल्ला अदालतले जेल सजाय गरेको उदाहरण छ। डिएनए किन मिल्दैन भन्ने बारे विज्ञ टोली गठन गरी छानबिन गर्न जरुरी छ। विज्ञ टोलीले डिएनए रुल आउट गर्नुपर्छ, हेडक्वार्टरले परीक्षण गलत छ भन्दैमा हुँदैन।
समाचारमा लेखिएको छ- गृहको प्रतिवेदनमा ‘प्राप्त तथ्यहरुको मूल्यांकन र विश्लेषण’ खण्डमा भनिएको छ, ‘लासलाई पानीमा घोप्टो पारेर फालिएकाले बलात्कारका कुनै पनि दशी प्रमाण लिन नसकिने गरी घटना अन्तै घटाई नियोजितरुपमा उखुबारीमा फालेको जस्तो देखिने । वारदात त्यहीँ घटेको भए मृतकको मुखभित्र माटो, फोक्सोमा पानीको मात्रा हुनुपर्ने ।’
शुरुको अनुसन्धान टोलीले समेत लाश भेटिएको स्थान secondary scene नै हो भन्ने दावा गरेको छ र दिलिप सिंह बिष्टले दिएको बयानमा समेत उखुबारीको छेउको ठाउँमा बलात्कार गरी मारेर लाश उखुबारीमा फालेको भन्ने बयान दिएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। रिपोर्टिङका क्रममा हामी त्यहाँ पुग्दा पनि खोला पारी खोला वारी सडकबाट नदेखिने खालको त्यस्तो घटना गर्न सक्ने ठाउँ रहेको हामीले देखेका थियौँ।
समाचारमा लेखिएको छ- छानविन समितिको प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘मृतकको कापी नभिजेको र मिलाएर राखेको अवस्था तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेको उक्त दसीलाई हाल हेर्दा पनि नीलो जेलपेनले लेखेको नोटकापी समेत पानीको कुनै असर नपरेको र रातभरि पानी परेको भन्ने आम नागरिक तथा प्रहरी कर्मचारीहरुसमेतको भनाइले लास उखुबारीमा नियोजित ढंगले ल्याई राखेको अनुमान गर्न सकिने ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कापी प्लास्टिक कोटेट थियो। कापी पानीमा डुबेको पनि थिएन। त्यसैले जति भिजेको थियो, त्यो स्वभाविक अवस्था थियो। साइकल साउन १० गते दिउँसो करिब ४ बजे देखेको कुरा प्रमाणित भएको र साइकलको बकेटमा राखिएको कापी, अम्बा र साइकलको रड समेत उक्त स्थानमा भेटिनुले त्यो स्वभाविक रुपमा साइकल जतिबेला त्यहाँ पुग्यो, त्यति नै बेला त्यो स्थानमा खसेको अनुमान लगाउन त्यति अन्यौलमा परिरहनु पर्दैन। अनुमान गरौँ यदि साइकल दिउँसो फालियो र राति पो कापी, अम्बा र साइकलको रड सोही स्थानमा फालियो कि? यो हास्यास्पद कुरा हुन जान्छ। प्रहरीलाई प्रमाण चाहिन्छ भनेर साइकल भएकै स्थानमा लगेर त्यो कुराहरु फाल्न जान्छ ??? ल भैगो मानौँ फाल्न गएछ रे। त्यसो हो भने पनि खोला समेत त्यहीँ भएको अबस्थामा किन कापी खोलामा फाल्दैन ??? त्यसैले यो कापी पछि लगेर फालियो भन्ने कुरा लजिकल छैन। गलत हो । यदि पछि लगेर फाल्ने हो भने सोही साइकल भएको स्थानमा लगेर फालिरहनु पर्ने जरुरी हुन्न र समितिले भने जसरी कपि कत्ति पनि नभिजेको र मिलाएर राखेको जस्तो भन्ने कुरै गलत हो किनकी प्रहरी भन्दा अगावै अम्बाका पोकाहरु चलाएको कुराको भिडियो नै छ जसले गर्दा जुन अवस्थामा कापीको फोटो लिइएको छ त्यसभन्दा अगावै स्थानीयले हात लगाइसकेको देखिन्छ।
समाचारमा लेखिएको छ- शव नजिकै अम्बा भेटिएको कुरा प्रहरीको मुचुल्कामा उल्लेख नहुनु र निर्मला पुगेको घरको अम्बाको रुख काटिनुलाई पनि छानविन समितिको प्रतिवेदनले शंकास्पद मानेको छ ।
अम्बा मुचुल्कामा उल्लेख गरिनु पर्ने थियो तर उल्लेख गरिएन। किन ? के यो नियोजित थियो वा मानविय त्रुटि अर्थात् लापरवाही के थियो ? खैर जे भए पनि अम्बाको पोका मुचुल्कामा उल्लेख हुनु र नहुनुले चाहिँ के असर हुन्छ त ? अम्बाको पोकाले अपराधीको पहिचान गराउँछ त ? अर्थात् अपराधी प्रमाणित गर्छ त ? के बम दिदी बहिनीले अम्बा आफ्नो बोटको होइन र निर्मला हाम्रो घरमा आएकै छैन भनेको अवस्था हो र ? त्यसो त होइन नि। त्यसो भए अम्बाको पोका मुचुल्कामा उल्लेख नहुँदैमा कसरी अपराधीले उन्मुक्ति पाउने हुन्छ? अम्बाको रुख काटियो, प्रमाण मेटाइयो भन्ने डम्फु पनि निकै बज्यो। आखिर के हो त यथार्थ ? बम दिदीबहिनीले निर्मला हाम्रो घरमा आएकै थिइन। हामीलाई उनको बारेमा केही थाहा छैन भनेको भए घटनास्थलमा भेटिएको अम्बा र बमको घरको बोटको अम्बा परिक्षण गराई घटनास्थलमा भेटिएको अम्बा ‍बमको घरको अम्बासँग मेल खाएमा ‘ए, बम दिदी बहिनीले ढाँटेको प्रमाणित भयो। त्यसैले यो घटनामा उनीहरुको संलग्नता रहेछ’ भन्ने पुष्टि हुन्थ्यो। तर यहाँ त रोशनी बमले निर्मला आएको, अम्बा खाएको र अम्बाको पोको लगेको कुरा भनेको अवस्था हो।
अम्बाको रुखमा झुन्ड्याएर मारियो, त्यस कारण रुख काटी प्रमाण मेटाइयो भन्ने हल्ला पनि आयो, नयाँ पत्रिकामा समाचारको भाषामा मिलाएर त्यो हल्लालाई वैधानिकता दिने काम पनि नगरिएको हैन। रिपोर्टर बम दिदीबहिनीको घरमा पुगेर रुख कहाँ थियो भनेर हेरेको मात्र भए पनि यस्ता समाचार आउँदैन थिए। पिच सडक छेउमा सडकबाट देखिने रुखमा मान्छे झुण्ड्याउँछ कसैले? मान्छे कुटपिट वा अन्य कुनै तवरले मार्ने अनि अरुलाई गुमराहमा पार्न आत्महत्या गरेको भन्ने पार्नलाई झुण्डाएर राख्ने सम्भावना हुन्छ। तर लाश उखु बारीमा फालेर झुन्ड्याएको नाटक मन्चन गरियो भन्नु मुर्खता हो र झुण्डिएको वा झुन्ड्याइएको लासको घाँटीमा स्पष्ट लिग्याचर मार्क हुन्छ जुन कुरा नाङ्गो आँखाले देखिन्छ। पाँच औँलाको डामसम्म देखिने घाँटीमा लिग्याचर मार्क नदेखिने भन्ने कुरै हुन्न। त्यसैले यो अम्बाको रुख काट्नु भनेको कुनै षडयन्त्र हो भन्नु गलत हुन्छ।
समाचारमा लेखिएको छ- गृहको छानविन प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने दिलीपसिंह विष्टमाथिको दाबीलाई पुष्टि हुन नदिने दुईवटा पाटा छन् – एक– सडक छेउको उखुबारीमा दिउँसै एकजना व्यक्तिबाट निर्मलाको बलात्कार गर्न नसक्ने छानविन समिति बताउँछ । दुई– डीएनए परीक्षणलाई नै अचूक प्रमाण मान्ने हो भने निर्मलाको भजाइनल स्वाबसँग दिलिप सिंह विष्टको डीएनए म्याच नभएको स्थिति छ ।
हालसम्मको अनुसन्धानले दिउँसो ४ बजे निर्मलाको साइकल देखेको प्रष्ट भइसकेको छ। लाश अन्यत्र लुकाई दिउँसो साइकल फाल्न जानु भनेको लाश फाल्नु जत्तिकै जोखिम हुनुले गर्दा निर्मला घरतर्फ जाँदै गर्दा उक्त घटनास्थल पुग्दा अपराधीसँग जम्काभेट हुनु जोखिम बिनाको स्वभाविक अवस्था हुन जान्छ। लाश नाङ्गो हुनु, दिनमा खोलावारी सडकतर्फ कुनै घर वा खुल्ला स्थानमा बलात्कार गरी मार्ने उपयुक्त स्थान नहुनु, साइकल भेटिएकै स्थान बाट पारी उक्लेको पाइलाले पुष्टि हुनु, उखुबारीभित्र लाश भेटिएको स्थान हिलो हुने हुँदा बलात्कार गर्दा र घाँटी थिच्दा उत्तानो पार्नु पर्ने त्यसो गर्दा पछाडि भागको कपाल,कपाल बाँधेको रबर र टिसर्टमा हिलो लाग्नु पर्ने सो नलागेको, उत्तानो पारेर मारेको भए लाश पुन घोप्टो पार्नु पर्ने कुनै कारण नभएको जस्ता विविध कारणले गर्दा दिनकै २ देखि ४ बजे भित्रनै खोलापारी उखुबारीको डिलमा बलात्कार र हत्या गरी उखुबारी भित्र फालेको हुनु पर्ने अनुसन्धानबाट देखिएको छ। त्यसैले चाहे दिलिप होस् वा अन्य कुनैले सो घटना घटाएको होस् स्थान र समय त त्यही हो। किन कसैले देखेनन् त ? कसैले देखेर पुलिसलाई भनेनन् वा कोही देख्ने मानिस नै छैनन्। तर दिलिप सिह विष्टले सोही अनुसन्धानसँग मेल खाने बयान दिएका छन्। त्यसको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ। डिएनए परीक्षणमा त प्रश्नै उठेको छ। गोदामचौर केसमा पीडितले नै पहिचान गरेका व्यक्तिको त डिएनए नमिलेको अवस्था छ भने डिएनए किन मिलिरहेको छैन भनी अनुसन्धानै गर्न जरुरी छ।
समाचारमा लेखिएको छ- तथापि सीआइबीका डीएसपी अंगुर जीसीले उपलब्ध गराएको कागजमा भने दिलिपसिंह बिष्टले उखुबारीमा बलात्कारपछि भोकल कर्ड थिचेर मारेको हुँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको गृहको प्रतिवेदनमा छ ।
अंगुर जि.सी.ले उखुबारीमा होइन उखुबारीको डिलमा बलत्कार र हत्या भएको हुनु पर्ने कागज उपलब्ध गराएको बताउँछन्।
समाचारमा लेखिएको छ- दिलिपसिंह विष्ट दोषी देखिने गरी कञ्चनपुर प्रहरी र सीआइबीको टोलीले गरेको अनुसन्धानमाथि गृहको छानविन प्रतिवेदनले विभिन्न प्रश्न उठाएको छ। जस्तो– लाश जाँच मुचुल्कामा निर्मलाकी आमाको सहीछाप नगराइएको, बरामदी सामानको मुचुल्का र घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का नमिलेको र मुचुल्का सच्याउन प्रहरीले पत्राचार गरेको जस्ता विषयमाथि छानविन प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ।
बरामदी सामानको मुचुल्का र घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का दुईवटा भिन्नाभिन्नै मुचुल्का हुन्। त्यसैले दुबैमा मेल खाने त कुरै भएन। दिलिप सिंह बिष्टको कपडा परिक्षणको लागी प्रहरीले फरेन्सिकमा पठाएको पत्र सच्याएको भन्ने बिषयलाई पनि ठूलो इस्यु बनाइयो। आखिर सत्य के हो त ? पत्रमा उल्लेख गरिएको र कपडाको वर्णन (description) मा केही त्रुटि भएको पाइएको हुँदा पत्रमा यो यो सच्याएर पुनः अर्को पत्र लेखिदिन फरेन्सिकले कन्चनपुर प्रहरीलाई अनुरोध गरेपछि सोही अनुसार सच्याइएको रहेछ। आखिर किन ? के हेर्न खोजिएको थियो दिलिपको कपडामा ? निर्मलाको रगत, रौँ केही चिज छ कि भनेर हेर्न खोजिएको थियो। निर्मलाको लाश समेत सदगत भैसकेको अवस्थामा निर्मलाका ती चिजहरु दिलिपको कपडामा हालेर परीक्षणको लागि पठाउन सम्भव नै थिएन। त्यसो भए के को लागि प्रहरीले पत्रमा दिलिपको लुगाको वर्णन गलत गर्नु पर्‍यो त ? प्रहरी त चाहन्थ्यो दिलिपको लुगामा निर्मलाको केही चिज भेटियोस् त फेरि किन दिलिपको कपडा साट्नु पर्‍यो वा गलत गर्नु पर्‍यो ?? सामान्य मानवीय त्रुटि जुन पत्र लेख्ने जवानले गर्‍यो जसको अर्थ ठूलो लगाइयो ।
समाचारमा लेखिएको छ- यो प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा ७० भन्दा बढीलाई सोधपुछ गरिएको, तर कुकुर प्रयोग नगरिएको, भदौ ४ गतेको बरामदी मुचुल्का र साउन ११ गतेको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्कामा फरक– फरक सामानको विवरण उल्लेख भएको । भदौ ४ गते सीआइबीको टोलीले नासपाती किनेर खाएको र कपडाका टुक्रा लिएर गएको वयानलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । अम्बाको रुख काटिएको जस्ता कुराहरुलाई पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
हामीले कुकुर प्रयोग गरी अनुसन्धान गर्नेहरुसित पनि कुरा गर्‍यौँ। केस स्पेसिफिक भएर कुरा गर्न उनीहरु तयार भएनन्। तर अनौपचारिक रुपमा उनीहरुले भनेको कुराको सार यस्तो थियो- स्थानीय ब्यक्तिहरुले घटनास्थल टेक्ने तथा छुने चलाउने गरिसकेको र पानी,हिलो र खोलाको कारणले समेत कुकुरको प्रयोगबाट प्रभावकारी नतिजा आउँदैन, उल्टो गलत मान्छेतर्फ संकेत गर्ने सम्भावना हुन्छ। सिआइबीको टोलीले नासपाती किनेर खाएको र कपडाका टुक्रा लिएर गएको देख्ने न कोही छ र नासपाति खाने टोली सिआईबी वा प्रहरी भन्ने नै कसैलाई थाहा थियो। प्रहरीले त आफ्नो परिचय नखुलाई दिलिपको भाउजु र भतिजी बुहारीको गोप्य भिडियो बनाएको थियो जसमा उनीहरुले खुलेर बोलेका थिए र दिलिपको बारेमा सबै नकारात्मक कुराहरुमात्र भनेका छन्। यसै बाट पुष्टि हुन्छ कि उनीहरुलाई नासपाती किन्ने मान्छे प्रहरी भन्ने थाहै थिएन। प्रहरीले कपडाको टुक्रा च्यात्ने भए दिनमा मानिसले देख्ने गरी पक्कै च्यात्दैन थियो होला।
समाचारमा लेखिएको छ- बम दिदीबहिनीको हकमा छानविन समितिको प्रतिवेदनको २० औं पृष्ठमा उल्लेखित ‘बुझिन आएको तथ्य’ यस्तो छ– ‘मृतक वालिका निर्मला पन्त साउन १० गते बम दिदीबहिनीको घरबाट हराएको हुँदा निज दिदी बहिनीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने पीडित पक्ष र धेरैजसो स्थानीयको माग रहेको तर उनीहरुलाई प्रहरीले केही दिनसम्म दिउँसो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर सोधपुछ गर्ने र बेलुकी घर पठाउने गरेको बुझिन आएको ।’ (पृष्ठ २०)
शुरुको प्रहरी टोलीले बम दिदीबहिनीलाई बचाउन खोजेर थुनेन रे ल। त्यसो भए पछि गएको टोलीले १८ दिन थुनेर किन छोडेको त ? किन नथुनेको ? थुन्नलाई त प्रमाण चाहिएला ,कम्तिमा नि प्रहरीलाई शंकास्पद लाग्नु पर्ला नि, परेन ? अहिले सम्म दशौँ अनुसन्धान टोली गए। किन बम दिदीबहिनी दोषी ठहरिएनन् त ?
त्यसैगरी सो प्रतिवेदनमा अनिता बम र निजको बुबाले ट्युशन शिक्षकलाई ट्युशन आएको भन्दिनु पर्‍यो भनेको अर्को विवादास्पद कुरा राखियो। शुरुमा सिआईबीको टोलीले बम दिदी बहिनीलाई बचाउन खोजेको मान्ने हो भने पनि किन फेरि पछिका टोलीहरुले पनि बचाउनै खोजे त? सबका सब बिकेका त नहुनु पर्ने। शुरुको टोलीले बम दिदीबहिनी दुबैको बयानको आधारमा ६ देखी ७ बेलुका ट्युशन गएको कुरा खुलेपछि प्रहरीले ट्युशन शिक्षकसँग बबिता ट्युसन पढ्ने गरेको कुरा प्रमाणित गरेको थियो। तर शिक्षकले बबिता १० गते आए नआएको भन्न नसकेपछि १० गते के पढाउनु भएको थियो भनी सोधे। उनले यो बिषय पढाएको कुरा भनेका थिए। प्रहरीले शिक्षकले भनेको बिषय अनिताको कपिमा भए नभएको चेक गर्‍यो र सोही अनुसार भेट्यो। तर प्रहरीले त्यतिमै अनुसन्धान सीमित गरेन र अनिताको साथि विद्या पन्तसँग पनि सोधपुछ गर्‍यो। विद्याले त झन् आफू उक्त दिन अनिता संगै एउटै बेन्चमा बसेको बताइन् र थप ११ गते समेत अनिता बिहान कलेज आएको र अनिताले १० गते निर्मला हराएर निर्मलाको आमासंग लफडा भएको समेत सेयर गरेको कुरा बताइन्। त्यसपछि प्रहरीले अनिता ट्युशन पढ्न गएको पुष्टि गर्ने प्रमाणको लागि विद्याको कापीको फोटो कपी लिएको थियो। यसरी सिआईबी संलग्न भई गरेको अनुसन्धान बाट पुष्टि भएको कुरालाई समेत समितिले जान्ने पल्टेर हल्लाको भरमा प्रतिवेदन बनायो जसले गर्दा भ्रम र हल्लालाई समितिले वैधानिकता दिने काम गर्‍यो ।
समितिले खाली शंका र अनुमान गर्ने र भिडमा उत्रिएका आन्दोलनकारीहरुको बयान संकलन गर्‍यो। प्रहरीविरुद्ध खनिएका पत्रकार खेम भन्डारी, महिला अधिकारकर्मी शारदा चन्द र मिना भण्डारी जस्ताको लहलहै र उनीहरुले फैलाएका अफवाह र भ्रमलाई समितिले वैधानिकता दिने काम मात्र गर्‍यो। समितिको प्रतिवेदन कति गहन थियो त भन्ने सम्बन्धमा तलको यी दुई उदाहरण मननयोग्य छ :
उच्चस्तरीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन पेज ११ मा कन्चनपुर कारागारका नाइके टेकराज जोशीको भनाई राखिएको छ जसमा उनले भनेका छन्- दिलिप सिंह विष्टको निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्नता छ भन्ने कुरा २०० प्रतिशत बिश्वास छैन यसमा गम्भिर षडयन्त्र भएको छ।
यसबाट के कुरा पुष्टि गर्न खोजिएको हो ? कसरी कारागार भित्र बसेका एक कैदीले अर्का ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गरी रिहा भएका ब्यक्तिको बारेमा २०० प्रतिशत विश्वास छैन भनी यकिनका साथ भन्न सक्छ? मैले म के गर्छु भन्ने विषयमा पो शतप्रतिशत जिम्मा लिन सक्छु, अरु कोहीको बारेमा २ सय प्रतिशत कसरी भन्न सक्छु। भन्नेले त भने रे ल, यस्तो तथ्यहीन कुरा पनि प्रतिवेदनमा राख्ने हो त?
सोही पेजमा दिलिप सिंह बिष्टको भतिजी बुहारीको बयान समेत राखिएको छ जसमा हाम्रो अंकल सोझो हुनु हुन्छ ,उनलाई फसाउन खोजिएको हो भनेकी छि उनले।
जबकि प्रहरीले जासुसी क्यामाराले प्रहरी भन्ने परिचय नदिई नास्पाति किन्ने बहानामा गफ गर्दा लिइएको भिडियो हेरेपछि वास्तविक कुरा छर्लङ हुन्छ। त्यसमा उनले दिलिपसँग आफूलाई डर लाग्ने, एक पटक आफ्नो कोठामा आउन खोजेको जस्ता कुरा गरेकी छिन्। भिडियो हेर्न क्लिक गर्नुस्।
स्मरणका लागि के लेखिएको थियो अनलाइनखबरमा भदौ ८ गते–
निर्मला पन्त किताव लिनका लागि जुन घरमा गइन् । तर, त्यो घरदेखि नै यो घटना एकदमै रहस्यमय छ । त्यो घर दुईतल्ले छ, त्यहाँ बम दिदीबहिनीमात्रै बस्थे । उनीहरुका बुबाआमा दार्चुलामा बस्ने गरेका थिए । घरमा उनका छोरीहरु रोशनी आँचल र बबिता मात्रै बस्थे । निर्मलाकी साथी रोशनी १८ वर्षकी छिन् भने उनकी दिदी बबिता अझै जवान भइसकेकी छिन् । उनीहरुको घर लगभग रित्तैजस्तो भए पनि भाडामा लगाइएको छैन ।
स्थानीयका अनुसार त्यो घरमा दुईजना केटाहरु प्रायाः आवत-जावत गरिरहन्थे । पछि पत्ता लागेअनुसार ती दुईजना केटाहरुमा एकजना कञ्चनपुरकै एसपी डिल्लीराज विष्टका छोरा रहेछन् । अर्काचाहिँ भीमदत्त नगरपालिकाका मेयरका भतिजा रहेछन् । स्थानीयका अनुसार दिदी बहिनीमात्रै भएको त्यो घरमा ती दुई युवकहरु बाक्लै आउने-जाने गर्थे ।
र, अन्त्यमा आफूले गरेको गल्तीको ढाकछोप गर्न गृहको प्रतिवेदनको सहारा लिए पनि अनलाइनखबरले किरण विष्टको यो प्रश्नको जवाफ त दिनै पर्छ।
किनभने बम दिदीबहिनीको घरमा किरण विष्ट र मेयरका भतिजा जाने गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख थिएन, त्यो अनलाइखबरले नै लेखेको समाचारमा थियो। यो जवाफ नदिएसम्म अनलाइनखबरको लोगोमा रहेको O र K ले Oho, Kiran को बारेमा त हामीले यस्तो लेखेका थियौँ भन्ने दाग पारिरहनेछ।
गल्ती हुँदा मिडियाले बन्द कोठामा मात्र स्वीकार्ने कि पाठकसित पनि सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने?
5 thoughts on “निर्मला प्रकरणमा गल्ती सच्याउन छाडेर अनलाइनखबर फेरि यसरी बहकियो”
Hemant lekhak says:
अनलाइन खबर डट कम ले शुरुमा 2075 साल भाद्र 8 गते शत प्रतिशत गल्ती गरेकै हो । उसले गल्ती सच्याउनु जरुरी छ । अर्काको चरित्र र भबिस्यको ख्यालै नगरी स्रोत उल्लेख नगरी गलत समाचार छपेकै हो । यसमा उनले माफी माग्नु पर्छ ।”सानालाई ऐन ठुलो लाई चैन” हुनु हुदैन। कानुन सबैको लागि बराबर हो भने !!!
माइसंसार.कम मैले २००८ देखि हेर्दै पढ्दै आयको नेपालको ब्लग हो.. सुरु देखि नै मलाई यसको लेखी एकदम राम्रो लाग्थ्यो,, जनान्दोलन देखि अहिले सम्म यो ब्लग ले हज्जारौ लेख, समाचार, लेख्दै आयको छ र सबै उत्कृष्ठ छन्. जाने सुने अनुसार, यसका सम्पादक सालोक्य जी र अनलाइनखबर का प्रकाशक श्री धर्मराज भुसाल कलेज का साथीहरु हुन्..
उमेश/ सालोक्य जी को यो लेख अक्दमै राम्रो छ र यस्तो लेख नेपालको राष्ट्रिय पत्रिका, कान्तिपुर नागरिक,नया पत्रिका, राज्धैनी, अन्नपुर्ण पोस्ट, आदि जस्ता ले लेख्नु पर्नी हो…
धन्यवाद सालोक्य जी..
यो खबर , त्यो खबर को कुरा हैन , यो दोसी , त्यो दोसी पनि भन्न पर्दैन | यहा सिस्टम चलाउने नै दोसी छ |
ठुला ठुला हत्या काण्ड गरेर , सत्ता मा पुगेका लाइ एउटी अबला बच्ची को बलात्कार र हत्या ख्याल ख्याल लाग्यो गर्ने के ?
दुनियामा मा कहिँ न भएको नेता , राजनीति र धेरै बाठा जनता |राजनीतिको को नाउमा हत्या गर्यो , जिम्मेबारी लियो सकियो | नोकार्बाही |
ओहो किरण को उत्तर पाउन अजै दबाब पुगेन जस्तो लग्यो.
रक्सि र मासु को भरमा समाचार लेखे पछि कहाँ बाट उत्तर पाउनु